Man United oo sare u qaadday dalabkii ay ka gudbisay Jadon Sancho & xiddiga ay dooneyso inay usoo qaadato baddelkiisa haddii ay ku guuldarreysato saxiixiisa oo la ogaaday – Gool FM
(Manchester) 20 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa si aad ah ugu dhow saxiixa xiddiga kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, waxaana ay dhowaan ka gudbisay dalabkii ugu horreeyay.
Balse kooxda Jarmalka ka dhisan ayaa iska soo diidday dalabkaas maadaama uusan ku qiimo ahayn qiimaha ay ku dooneyso inay ku iibiso xiddigeeda.
Majaladda Mirror ayaa sheegtay in Man United sidaas darteed ay haatan diyaarineyso dalab labaad oo ka qiimo badan midkii hore si ay gacanta ugu soo dhigto xiddiga xulka qaranka England.
Waxay sidoo kale majaladda intaas ku dartay inay Red Devils il gaar ah ku eegeyso xaaladda Ousmane Dembele oo gudo galaya sanadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa Barcelona si ay ugu dhaqaaqdo saxiixiisa haddii ay ku fashilanto soo iibsashada Sancho.
Wargeyska Sport Witness oo soo xiganaya Mundo Deportivo ayaa sidoo kale warkaas adkeeyay isagoo xaqiijiyay inay Man United kusoo laabatay xiisaha xiddiga Faransiiska kaddib markii uu isku diiday inuu Old Trafford u dhaqaaqo xagaagii hore.
Si kastaba ha ahaatee, wakiillada Dembele ayaa haatan wada-xaajood aan socod fiican lahayn kula jira kooxda Barca si qandaraaska loogu kordhiyo, balse mustaqbalkiisa ayaanan wali hubanti ahayn.
Kulammada Group A ee tartanka Euro 2020 oo caawa lasoo af-meeri doono... (Waa sidee rajada xulalka Wales, Switzerland & Turkey?)